90 maalin kadib Mukhtaar Roobow ma helin wax cadaalad ah (Faallo) – Kismaayo24 News Agency
by Mohamed Abdirashid Abaajo 13th March 2019 0118
Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo kamid ahaa Musharixiintii isku soo taagay doorashadii bilo ka hor ka dhacday Magaalada Baydhabo isla markaasna xabsi ku jiray markii ay Doorashadad dhaceysay ayaa Maanta waxaa xarigiisa sharci darada ahaa kasoo wareegatay 90 Maalin.
Haddaba waxaan warbixintaan kusoo koobeynaa Xaaladaha uu soo maray Kiiska Shiikh Mukhtaar Roobow oo hadda ah Maxbuus aan helin caddaaladii uu mudnaa.
Is dhiibistii Roobow
13 August 2017 ayaa Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur laga soo dajiyey Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya markaas oo uu isku soo dhiibay Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Sheekh Mukhtaar ayaa waxaa la socday markii uu kasoo dagayey Garoonka Muqdisho Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya C/rashiid C/llaahi Maxamed iyo Taliye kuxigeenka NISA Jaamac iyagoo diyaarad Qumaatiga u kacdo ee loo yaqaan Helicopter kasoo raacay Magaalada Xudur.
Roobow ayaa lagu qanciyey inuu usoo safro Muqdisho si uu wadahadal ula yeesho dowladda Soomaaliya kadib markii uu ku qanci waayey siyaasadda qalafsan ee Al-Shabaab.
Roobow Abuu Mansuur iyo mowqifkiisa Al-Shabaab
laba Maalin kadib imaaashiyihiisii Muqdisho 15 August 2017 Roobow Abuu Mansuur ayaa si cad usoo bandhigay mowqifkiisa ku aadan Xarakada Al-Shabaab.
Wadaadka ayaa sheegay in Shacabka Soomaaliyeed iyo Beesha caalamka uu u sheegayo inuu ka baxay Al-shabaab.
Wuxuu sheegay in 5 ilaa iyo 7-sano ka hor uu ka baxay Al-shabaab, islamarkaana intaasi uu ku sugnaa duurka halkaasi uu kaga dhuumanayay Al-shabaab oo baadi goob ugu jiray.
Sheikh Mukhtaar Roobow ayaa u mahad Celiyay Dowladda Soomaaliya ka dib markii ay guulo ku soo dhamaadeen Wadada hadalo mudo u socday.
“Anigoo ah Shiikh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur, kana mid ahaa asaasayaashii Al-shabaab, soona noqday ku xigeenkii madaxa Alshabaab waxaan u cadeynaya dhamaan ummada Soomaaliyeed iyo Beesha Caalamka oo dhan qodobada soo socda:-
1- In aan ka baxay xubina ka aheyn ururka Al-shabaab muddo 5 sano iyo 7 bilood ah, sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf caqiido ku qotoma oo ku saabsan arrimo aanan diinta, dadka iyo dalka u adeegaynin.
2-Waxaan u mahadcelinaya Dowladda Soomaaliya iyo saaxiibadeeda Caalamka kaalintii ay ku lahaayeen in heerkan wax so gaaraan.
3- Waxaan cadeynaya inuu wadahadal noo socdo Dowladda Federaalka Soomaaliya, oo aan marti ugu ahay magaalada Muqdisho, wadahadal kaasna aan ka fileyno natiijo iyo isfahan wax gal noqda Inshallah.
4-Waxaan mar labaad u mahad celinaya Dowladda Soomaaliyeed , Shacabkeeda iyo Madaxdeeda sida diiran ee la iigu soo dhoweeyay Muqdisho, anaga oo rajo ka qabna inaan u gogol xaarno Nabad waarta
Hadalkaan ayaa ahaa mid laga filayey Roobow oo ay horey ugu heshiiyeen isaga iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Fikirka Mareyknka kadib is dhiibistii Roobow
August 16, 2017 Qoraal kooban oo kasoo baxay xafiiska Howlgalka Mareykanka ee Somalia ayaa waxaa lagu sheegay in Dowladda Mareykanka ay soo dhaweyneyso go’aanka Abuu Mansuur uu ku cadeeyay fikirkiisa.
Waxaa qoraalka lagu sheegay in adduunka ay ahmiyad gaara u leedahay isa soo dhiibida Roobow, waxaana sidoo kale mahad gaara loo jeediyay dowlada Federaalka Somalia.
Waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in dowlada Federaal ay guulo ka gaareyso habka ay kula dhaqmeyso Kooxaha nabadiidka maadaama ay siineyso fursad ay isku soo dhiibaan.
Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay inay is garab taagi doonaan dhammaan shaqsiyaadka kasoo baxay maleeshiyaadka Al-shabaab ee iminka ku jira gacanta dowlada.
Muxuu Kheyre ka yiri is dhiibista Roobow?
August 31, 2017 , Ra’isul wsaaaraha xukuumada Somalia, Xasan Kheyre ayaa ka hadlay isa soo dhiibida Sheekh Mukhtaar Roobow iyo wadahadalka kala dhexeeya dowlada Federaalka.
Ra’isul wasaare Kheyre waxa uu sheegay in Mukhtaar Roobow uu isku soo dhiibay dowlada Federaalka, isla markaana ay magaalada Muqdisho kasoo dajiyeen ciidamo ka tirsan dowladda.
Waxa uu Kheyre beeniyay wararka sheegaya in Mukhtaar Roobow ay magaalada Muqdisho keeneen ciidamo cadaan ah, waxa uuna qiray in howsha Roobow ay tahay mid khuseysa keliya DFS.
Sidoo kale Kheyre wuxuu carabka ku dhuftay inuu weli socdo wadahadalka Mukhtaar Roobow kala dhexeeya dowlada Federaalka, isla markaana uu aad ugu rajo weyn yahay in xal laga gaaro wadahadalka socda.
Wuxuu sheegay Ra’isul wasaaraha dalka in markii uu soo idlaado wadahadalka ay kula jiraan Mukhtaar Roobow ay warbaahinta la wadaagi doonaan wixii natiijo ah ee kasoo baxa, sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu intaa raaciyay in DFS ay ka faa’ideysan doonto Roobow khibarada uu u leeyahay arrimaha amniga iyo sidii looga qaadan lahaa fursada uu u leeyahay in dalka oo dhan amni laga dhigo.
Sidoo kale, Kheyre ayaa cadeeyay in DFS ay ka dhabeyn doonto go’aankii ahaa inay cafin doonto Al-shabaabka isku soo dhiiba, maadaama uu khalad ka dhaco bani’aadamka.
Dowladda Soomaaliya iyo Roobow oo heshiiyey
Dowladda Soomaaliya iyo Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur ayaa heshiis wada gaaray, waxaana ugu dambeyn lagu heshiiyey in Roobow xuriyadiisa la siiyo isla markaasna uu dalka joogo isagoo xor ah.
Inkastoo aan la helin waxyaabaha rasmiga ah ee lagu heshiiyey oo ahaa kuwa qarsoodi ah, haddana gadaal dambe markii Roobow Baydhabo laga soo xiray waxaana dib u kashifay Wasiirkii hore Gaashaandhigga Cabdirashiid oo la hadlay VOA.
Al-Shabaab iyo mowqifkeeda Roobow
Cali Dheere oo soo diray fariin la dhageysan karo muddo 38 daqiiqo iyo 56 ilbiriqsi ah, ayaa sheegay in mowqifkooda uu yahay mid cad.
Cali Dheere ayaa sheegay in al-Shabaab iyo Wadaadka Muqtaar Rooboow uu ka dhaxeeyay khilaaf mudo soo jiray kaas oo ku saabsan xagga caqiiqada.
Cali Dheere waxa uu sheegay in khilaafka markiisa hore uu ahaa mid ka bilowday taageero uu Roobow u muujiyay Hay’addaha Gargaarka ee howlaha Samafalka ka fuliya Soomaaliya balse ay Shabaab si weyn u diidan yihiin isaga oo sheegay in kulamo qarsoodi ah uu la qaadanayay Hay’adahaasi.
Cali Dheere waxa uu sidoo kale sheegay in Roobow uu gacan midig u ahaa Dowladaha Shisheeye oo ay Al-Shabaab u arkaan cadawga kusoo duulay Somalia, hase yeeshee uu Roobow ahaa mid ku adkeysanaayay rabitaankiisa.
Waxa uu tilmaamay in Roobow uu isku dayay in uu laba u kala qeybiyo Shabaab balse ay taasi kasoo horjeesteen sidaana uu ku bilaabay wadahadalka dowlada Somalia ee ugu danbeyntii sababay inuu u goosto.
Waxa uu tilmaamay in Roobow uu ka shaqeyn jiray sida loogu hogaansami lahaa amarada qaar ee ka imaanaayay Beesha Caalamka kuwooda jooga Somalia.
Roobow oo Xaalad caadi ah galay
Kadib heshiiska ay wada galeyn dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur, waxaa suurta gashay inuu Roobow xor u noqdo inuu tago meel kasta oo ka tirsan Soomaaliya, wuxuuna booqday Baydhabo, Xudur, Kismaayo iyo Sacuudi Carabiya halkaas oo uu Cimro u aaday.
Markaas kadib Roobow ayaa loo soo bandhigay qorshooyin ku aadan inuu isku sharaxo Doorashada Koonfur Galbeed oo ay markaas ka dhimaneyd bilooyin badan, wuxuuna go’aan ku gaaray inuu isku soo taago maadaama ay u muuqatay fursad weyn oo uu xilkaas ku heli karo.
Dowladda Soomaaliya oo markii hore fasaxday Roobow ayaan wax hadal ah kasoo saarin booqashooyinka iyo Xaaladaha caadiga ah oo uu galay Roobow, sidoo kalana kama aysan hadlin Ololaha uu waday Roobow ee uu ku doonayey inuu isku sharaxo Doorashada Koonfur Galbeed waxaana muuqatay inay Dowladda Soomaaliya ku qanacsaneyd inuu Roobow xilkaas isku soo sharaxo.
October 04, 2018: Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansoor, ayaa magaalada Baydhaba ee xarunta gobolka Baay kaga dhaawqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed.
Roobow, ayaa mar soo noqday hogaamiyaha labaad ee ururka al-Shabaab, waxaana madaxiisa saarneyd lacag uu dul dhigay Mareykanka inkastoo markii dambe laga saaray Liiska Argagixisada.
Roobow ayaa ka mid noqday murashixiin ilaa iyo 10 gaaraya oo ku baratamayey doorashada Koonfur Galbeed oo ka dhacday Baydhabo.
Dowladda oo Roobow u diiday inuu is sharaxo
October 5, 2018, War qoraal ah oo kasoo baxay wasaarada amniga xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur aanu ka qeyb gali Karin doorashada madaxweynenimo ee ka dhacday maamulka Koonfur Galbeed .
Roobow oo qaatay shahaadada musharraxnimada KGS
November 5, 2018 , Musharaxii ugu horreeyay ee isdiwaangaliya ayaa waxaa noqday Mukhtaar Rooboow Cali Abuu Mansuur oo horay dowladda Soomaaliya ay ugu diiday in uu ka qeyb galo doorashadda Madaxtinimada Soomaaliya.
Dowladda oo heshiiskii uga baxay Roobow iyo C/rashiid oo kashifay
October 9, 2018 , Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga C/rashiid C/llaahi Maxamed, oo ahaa ninkii Muqdihso keenay Mukhtaar Rooboow Abuu Mansuur, ayaa ka hadlay dooda dowladda ay gelisay musharaxnimada Rooboow.
Dowladda, ayuu ku dhaliilay iney Rooboow uga baxday balamo ay wada galeen, taasoo qeyb ka eheyd inuu isu sharixi karo doorashada Baydhabo ka dhacday.
C/rashiid Cabdullahi Maxamed oo ahaa shaqsigii bilaabay wada hadalka dhexmaray dowladda federaalka iyo Sheekh Muqtaar Roobow ayaa sheegay qaabkii loo balamay in badan oo ka mid ah in dowladda dhankeeda uusan ka fulin.
“Muqtaar Shabaab mar hore ayuu ka baxay, warkiisana wuu cadeeyay, dagaallo lala galay Shabaab wiilkiisa C/laahi ayaa kaga geeriyooday, marin habaabin ayaan u arkaa in Muqtaar markale lagu tiriyo Shabaab, dano siyaasadeed ayaa laga leeyahay arrintan”. ayuu yiri wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya oo la hadlay VOA-da.
Sidoo kale wuxuu qiray intii uu wasiirka ka ahaa wasaaradda gaashaandhigga in lagu balamay Shabaab intooda ku haboon in wadahadal lala galo, inta kalena dagaal toos ah lagu qaado, balse dowladda ayuu ku tilmaamay inay arrimahaasi meel iska dhigtay oo ay ku mashquushay siyaasadda maamul goboleedyada iyo doorashooyinka 2020-ka.
Guddiga doorashada KGS oo go’aan ka gaaray musharaxnimada Roobow
November 1, 2018 Guddiga doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan ku yeeshay Magaalada Baydhabo ee Xarunta maamulkaas ayaa ansixiyey illaa seddex qosob oo xasaasi ah.
Guddiga ayaa si cad u sheegay in Mukhtaar Cabdiraxmaan Robow Abuu Mansuur uu u tartami karo doorashada Madaxweynenimo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, islamarkaana aysan jirin wax sharci ah oo u diidi kara.
Roobow oo Baydhabo laga afduubtay
Markii la arkay Saameynta uu leeyahay Roobow Abuu Mansuur, Dowladda Soomaaliya waxaa ku dhalatay go’aan ah in la xiro Roobow maadaama aan awood kale lagu celin karin waxayna dowladda Soomaaliya wadatay musharaxa hadda laga dhigay Madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Lafta Gareen.
December 13, 2018, Roobow Abuu Mansuur ayaa laga soo afduubtay Magaalada Baydhabo ee Xarunta Maamulka Koonfur Galbeed .
Ilo ku dhow Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur ayaa sheegay in xariggiisa uu ahaa qaab shirqool ah oo laga soo shaqeeyey, waxeyna xaqiijiyeen in ciidamada Ethiopia ee ku sugan magaalada Baydhabo ay ka dambeeyeen falka lagu xiray Abuu Mansuur.
Waxaa ay sheegeen in Mukhtaar uu ka mid ahaa musharrixiinta Koonfur Galbeed oo lagu ballamiyay Madaxtooyada maamulkaas.
Inta badan Musharrixiinta madaxweynaha Koonfur Galbeed waxaa ballamiyay C/Qaadir Shariif Sheekhunaa, oo ahaa ku simaha Madaxweynaha sidoo kalena ah Guddoomiyaha Baarlamaanka Koofur Galbeed.
Qof ka mid ah Xogheynta Abuu Mansuur ayaa sheegay in iridda madaxtooyada markii uu marayay lagala degay gaariga, kaddibna halkaas lagu jir dilay lana ka xeystay.
Rabshado ka dhacay Magaalada Baydhabo iyo shacab la laayey:
December 14, 2018: Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo tobaneeyo dad shacab ah ayaa ku dhintay kaddib mudaharaadyo rabshado wata oo ka dhacay magaalada Baydhabo.
Goobjoogayaal ayaa VOA-da u sheegay in geerida xildhibaan C/shakuur Yacquub Ibraahim ay timid kaddib markii ay ciidamada amniga maamulka Koonfur Galbeed isku dayeen in ay rasaas ku kala eryaan dadkii mudaaharaadayay.
Wariyaha VOA-da ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay in mudaaharaadyada ay soo abaabuleen shacabka Baydhabo oo kasoo horjeedo Xariga Shiikh Mukhtaar.
Dadka ayaa dalbanayay in si dag dag ah xorriyadiisa dib loogu soo celiyo Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur oo ay magaalada Baydhabo ku xireen ciidamo Itoobiyaan ah, loona gudbiyay magaalada Muqdisho oo uu hadda ku xiranyahay.
Roobow ayaa laga saaray liiska musharixiinta KGS
December 16, 2018, Guddiga Doorashada Koonfur Galbeed ayaa shaaciyey in Mukhtaar Roobow laga saaray liiska musharixiinta, kadib markii ay xirtay dowladda Soomaaliya.
Mukhtaar Roobow ayaa ka mid ahaa musharixiinta buuxiyey shuruudaha Guddiga Doorshada, isagoo laba jeer la guddoonsiiyey Shahaado musharxnimo, wuxuuna bixiyey lacagta is-diiwaangelinta oo dhammeyd 20,000 Doolar.
Beesha caalamka oo soo saaray qoraal ka dhan ah xariga Roobow iyo dilkii Shacabka
December 31, 2018, Wakiilkii hore ee xoghayaha guud ee QM ee Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa qoraal xasaasi oo ka dhan ah habkii loo fuliyey xariga Mukhtaar Roobow iyo dadkii lagu dilay Baydhaba u diray dowladda Soomaaliya, isaga oo ka wakiil ah beesha caalamka.
Qoraalka oo ku socday wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale, ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay gaysteen xadgudubyo ka dhan xeerarka xuquuqda aadanaha QM, islamarkaana maadaama QM ay bixiso mushaarka ciidamada qeyb ka mid ah, ay qasab tahay inay arrintan jawaab u raadiso.
Waxa uu dowladda ka dalbaday inay deg deg jawaab uga soo bixiso dhowr su’aalood oo ay ka mid yihiin 1 – Maxaa sharci ah oo loo adeegsaday xariga Roobow?
4- Maxaa tallaabo ah oo la qaaday si lo helo amar xabsiga lagu sii haayo Roobow, wax ka baxsan 48-ka saac ee xeerka dambiyada Soomaaliya?
Roobow weli waa xiran yahay
Maanta oo ay taariikhda tahay 13 March oo ay kasoo wareegatay Xarigii Roobow 90 maalmood, weli wuxuu ku jiraa Xabsi ku yaal Magaalada Muqdisho.
Aaway Ballan qaadkii Mursal iyo Lafta Gareyn
January 22, 2019, Afhayeenka Gollaha Shacabka Baarlamaanka Somalia oo magaalada Baydhabo kula kulmay Odayaasha dhaqanka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa wacad ku maray in lasoo dayn doono Mukhtaar Roobow.
“Waxaan adiin balan-qaadayaa in Mukhtaar Roobow lasoo deyn doono,” sidaasi ayuu Mursal u sheegay Odayaasha uu kula kulmay magaalada Baydhabo.
Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa sheegay in rajada ay ka qabaan tani ay tahay mid meel fiican mareysa, inkasta oo uu xusay inay jiraan su’aalo badan oo horyaala oo ku saabsan mustaqbalka Roobow.
“Waa lasoo dayn doonaa Mukhtaar…laakiin, miyuu qayb ka noqonayaa dowladda mise Bakaaro ayuu guri ka degayaa…waa arrimaha aan kawada hadleyno,” ayuu Mursal u sheegay wariyaasha kadib kulankaasi.
Isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu daboolka ka qaaday in xariga Afhayeenkii hore ee kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ay dowladdu kala kulantay dhaleecay ka timid Beesha Caalamka, taasi oo ku noqotay waydiimo ku foorarta.
“Wakiilkii Qaramada Midoobay [Haysom oo ay dowladu fiijisay] wuxuu xilkiisa ku waayay arrinta Roobow,” ayuu Afhayeenka hadalkiisa raaciyay, isaga oo muujinaya sida ay saaxibada caalamka uga soo horjeedaan.
“Aniga iyo Laftagareen [Madaxwaynaha Koonfur Galbeed] waxaa nahay kuwa ay eegayaan dadka gobolkaan kasoo jeeda, hadii aan soo dayn wayno Mukhtaar kuraasta aan ku fadhino waa wax kale,” ayaa laga soo xigtay Mursal.
Aaway Magdhowgii Shacabkii lagu laayey Baydhabo?
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Mursal ayaa sheegay inay madaxda ugu sareyso dalka ballan qaadeyn inay magdhow ka bixinayaan dadkii lagu laayey magaalada Baydhabo intii lagu guda jiray olalaha doorashada oo ay gacma-gacmeysay xukuumada.
Ma jiro illaa hadda magdhow laga bixiyey dadkii lagu laayey Magaaladaas inta laga warqabo sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka tirsan eheladii dadkii la laayey.
Muwaadin kasta ee Soomaaliyeed oo aaminsan Sarreynta/Talinta Sharciga kana soo horjeeda Sarreynata/Talinta Qofka waxaa waajib ku ah inuu difaaco Mudane Sheikh Mukhtar Roobow sababaha hoos ku qoran:
Warsaxaafadeedka Wasaaradda Amniga wuxuu caddeynaya in DF ay ku xadgudubtay Xuquuqda iyo Xuriyadda muwaadin Mukhtar Roobow (xitaa haddii uu yahay eedeysane) marka la fiiriyo qodobbada kala ah 15 (Xorriyadda iyo Nabadgelyada qofnimada), 33 (Go’aanno maamul oo cadaalad ah) , 34 (Xaqa Dacwada iyo Is difaaca) , 35 (Xuquuqda Eedeysanaha) ee Dastuurka KMG. Qodobbadaas ayaa ilaalinaya difaacayana xuquuqda iyo xorriyada Mukhtar Roobow iyo muwaadin kasta. Muwaadinku wuxuu xaq u leeyahay inuu diido xadgudubka DFS.
Haddii Shacabku ka aamuso xadgudubyada DF, waxa galaya halis nabadgelyada, xasillonida, iyo horumarka dalka Soomaaliyeed. Wax garadka Soomaaliyeed waa inuu wax ka arkaa daaha gadaashiisa oo aan lagu khaldin sheekooyin dhalanteed ah, afminsharnimo, iyo been.
Horumarka dalka wuxuu ku jiraa runta, kumana jiro beenta iyo musuqmaasuq. Waa fadeexo wax garad ku doodaya in musuqmaasuqa DF la qariyo si adduunka wax noo siiyo, kaddibna la musuqmaasuqo.
Sheikh Mukhtar Roobow wuxuu ka mid ahaa Madaxda Ururka Maxaakiinta Islaamka, kaddibna wuxuu ku biiray Al Shabab oo uu ka soo goostay 2013. Dowladda Mareykanka ayaa 2012 madaxiisa saartay abaalmarin dhan 5 Milyan doolar si loo soo qabto ama loo soo sheego meesha uu joogo si loo khaarijiyo.
Roobow wuxuu muddo 4 sano ku dhex noolaa deegaanka Koofur Galbeed, halkaaso ay ku difaacayeen ciidammo daacad u ah.
Dhowr jeer ayaa Ciidammo ka tirsan Al Shabab soo weerareen, isla markaana ka badbaaday baadi goobkii Dowladda Mareykanka. 2017 ayaa Dowladda Mareykanka ka qaaday lacagtii abaal marinta aheyd, taaso albaabka u furtay in DGKG iyo DF soo dhoweeyaan Sheikh Roobow si heer sare ah, kana mid noqdo xubnihii ka soo goostay Al Shabab oo xilal xasaasi ah ka haya hay’adaha nabadsugidda iyo Garsoorka DF.
Roobow Weli Cadaalad ma helin!
Roobow Abuu Mansuur ayaa 90 cisho si sharci darro ah ugu xiran Dowladda Federaalka Soomaaliya maadaama aan lagu soo xirin waraaq maxkamadeed isla markaasna aan weli la hor geyn Maxkamad iskaba daaye uu ku xiran yahay meel gaar ah.
Dadka Koonfur Galbeed waxay dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Beesha Caalamka uga fadhiyaan inuu Cadaalad helo Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo ah Muwaadin Soomaaliyeed oo badalay kana soo laabtay fikirkii Al-Shabaabnimo.
Afeef: Aragtida qoraalkan waxa ay ku gaar tahay qofka ku saxiixan,
SAWIRO: Fuaad Shangole oo mudo dheer ka dib ka soomuuqday Meel fagaaraa.
Dhageyso: Wareysi aan idin kaga heyno mukhallasiin soomali ah oo lagu xiray magaalada juba ee suudaanta koonfureed
Tifaftiraha K24 14th March 2017
DAAWO SAWIRADA – Meydadka Kooxdii Weerarka ka geysatey Xarunta Sameynta Maamulka Gobalada Dhexe ee Cadaado oo la soo Bandhigey